जनभोजनलाई जनता बैंकद्वारा दुई लाख सहयोग - Everest Dainik - News from Nepal
जनभोजनलाई जनता बैंकद्वारा दुई लाख सहयोग
काठमाडौं । प्रेमसागर फाउण्डेसन नेपालले संचालन गरेको जनभोजनलाई जनता बैंकबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत २ लाख सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ ।
जनभोजन कार्यक्रमको कार्यालय तसर्पु, दामेचौर, धादिङमा एक कार्यक्रमको बीच जनता बैंकको तर्फबाट प्रेमसागर फाउण्डेसनका उपाध्यक्ष डा. प्रेमराज ढुङ्गेललाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
प्रेमसागर फाउण्डेसनद्धारा संचालित जनभोजन कार्यक्रमले दैनिक ५ सय बालबालिका र करिब १ सय जना वृद्ध आमाबुबाहरुलाई दैनिक बिहानको खाना खुवाउदै आएको छ । साथै, धादिङ र मकवानपुरका केही विद्यालयका करिब १५०० बालबालिकालाई दिवा खाजाको कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नक्कली चेक बनाएर अर्काको खाताबाट यसरी निकालियो पैंसा !
दैनिक करिव रु। ५० हजार रकम बराबरको बिहानी खाना र दिबा खाजाको कर्याक्रम संचालन गर्दै आइरहेको फाउण्डेसनलाई जनता बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट ४ दिन बराबरको खाना तथा खाजा सहयोग बापत उक्त रकम सहयोग गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रमको प्रभावले यस क्षेत्रका सत प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भएका र शैक्षिक गुणस्तरमा पनि धेरै सुधार आएको फाउण्डेसनले जनाएको छ । रातोपाटीबाट
ट्याग्स: जनता बैंक
कोरोना परिक्षणका युएई सरकार संग दूतावासले समन्वय गर्ने,भिषा सकिएकाहरुको जरिवाना मिनाहा